umshini wokupheka wezinkukhu kagesi,ukudla kwenkukhu,ukufuya izinkomo
Ikhono:1000~ 1500kg / h
Usayizi wokugcina womkhiqizo:impuphu ecolekile
I-gritter kagesi kagesi ngumshini wokugaya we-hammer wokugaya osetshenziselwa ukucubungula izinkukhu ukhiqize izinto ezingavuthiwe zibe izingcezu ezincane ezinosayizi abafanelekile ukusiza inqubo eqhubekayo. Futhi singuchwepheshe ekwakheni nasekukhiqizeni imishini yokudla okusanhlamvu okuningana okukhethayo.Lomshini wokugaya ummbila wakhiwa nge-feed hopper, ibhulokhi yenjini ephezulu, ibhlokhi enjini, irotor, thunga, fan osebenzayo, ipayipi lokulethwa kokudla, njll. Futhi isikhwama sokugcina kanye nomgqomo wokugcina singafakelwa njengoba kudingeka amakhasimende. Ngaphandle kwalokho, sinikeza neminye imishini emibili efanayo yokugaya izithako zokuphakelayo
Izici ze-Electric Corn Grinder
1.le grinder yenkukhu yokudla inensiza ebanzi. Izinhlobo ezahlukene zezinto zokusetshenziswa ezingachotshozwa, njengokolweni, ummbila, irayisi, ubhontshisi, umhluzi, amabele noma ezinye izinto eziqinile njengethambo, inyama eyomile nokunye.
2. lokhu grress kagesi kagesi kwamukele isakhiwo esilula nokwakhiwa okuthuthukile.
3. lo mshini we-grinder yommbila usebenza kahle kakhulu, kulula ukusebenza, ukusebenza okuzinzile.
4. Kungasetjenziswa isando sokudla segesi ngesando sezinhlwayi, isilwane kanye nenkukhu feed pellet isitshalo, i-fiberboard, ibhodi yokuxinana ephezulu, imboni yokukhiqiza amaphepha, njll.
5. Umshini wethu wokudla kagesi wokudla owakhiwa ngogesi uhlanganiswa ne-hopper yokondla, irotor, sieves, okusalungiswa fan, Igumbi lokuchoboza nethuluzi lokulethwa.
Ukusebenza Isisekelo segesi kagesi
Izinto eziluhlaza zingena egumbini elichobozekayo ngokusebenzisa ukondla i-hopper bese zichotshozwa isivinini esikhulu sokujikisa isando. Izinto ezisakazwayo zisheshe zichotshozwe izingcezu ezincane ngaphansi kwesiteleka esiqhubekayo, shayisana futhi ushaye ngezinsimbi zesando, ipuleti enamanzi nezicucu zesikrini. Kwakube sekuthunyelwa izinto ezichotshoziwe ukuthi zidlule kwizimbobo zesikrini. Izinhlayiya ezinkulu ezingenakudlula kwizimbobo zesikrini zidinga ukuphinda zichotshozwe.
Ukulondolozwa Kokuphehla Kagesi kagesi nokuxazulula izinkinga
☑ Sebenzisa umshini wokugaya ummbila ulandela ngokuqinile imiyalo yokusebenza. Ukuhlola kanye nokuhlanza umshini ukushintshwa ngakunye.
☑ Hlanza ngaphakathi nangaphandle komshini ngesikhathi sokuphumula eside, ukugwema i-grinder ukuthi igqwale noma i-mesh yosizi ivinjwe.
Ha Shintsha bese ubuyisela izingxenye zomzimba ngesikhathi uma ziphukile noma zigqokwa kakhulu.
☑ Bheka ukuqina kwebhande likanxantathu ngaso sonke isikhathi lapho liqala. Ukuguga kwebhande kuzothinta ukusebenza kwesigxobo sesando.
☑ Kuyinto ejwayelekile ukuthi ukushiswa kwamatshe kuthwale (hhayi ngaphezulu kuka-25 ℃ ) ngemuva kwalomshini wokugaya ummbila usebenza isikhathi esithile. Uma ukushisa kufinyelela 60 degrees, kufakazelwa ukuthi ukuthwala bekuguga, khona-ke abathengi kufanele bayeke ukufaka okunye esikhundleni noma ukukuhlanza.
Ukucaciswa komshini we-grinder kagesi kagesi
Ividiyo yomshini wokugaya ummbila